Borotokoolka Nym: Nidaamka Qarsoodinimada ee Meel Furan iyo Furan | Laga soo bilaabo Linux
Borotokoolka Nym: Isha furan iyo nidaamka asturnaanta baahsan
Linux Post Ku Rakib | 02/10/2021 06:00 | La cusbooneysiiyay 28/09/2021 20:20 | Aplicaciones, Noticias
Waqtigan xaadirka ah adduunka, sababtuna tahay kororka hawlgallada internetka iyo waxqabadyada ay sabab u tahay Cudurka faafa ee 'COVID-19', ah jabsada nidaamyada iyo isgaarsiinta internetka. Sidoo kale waxaa jira koror ku yimid si xun u isticmaalka xogta by shirkadaha tiknoolajiyadda ee ugu waaweyn dunida, gaar ahaan kuwa leh Warbaahinta Bulshada iyo Madal Fariin.
Si loola dagaallamo jirrooyinkaan ama dhibaatooyinka la xiriira asturnaanta, qarsoodiga iyo amniga internetka dadka isticmaala, iyo hawlgalladooda internetka iyo isgaarsiintooda, mashaariic xiiso leh ayaa soo baxay gaar ahaan baahsan oo baahsan. Mid ka mid ah waa mashruuca "Nym Protocol" kaas oo ku jira marxalad horumarineed oo buuxda.
Iyo tan, waxaan si joogto ah wax uga qabannaa Mashaariicda Farsamada ee baahsan ama maya, waxay diiradda saaraan asturnaanta, aqoonsi la'aanta iyo amniga internetka isticmaaleyaasheeda, waxaan isla markiiba hoos uga tagi doonaa qaar ka mid ah xiriiriyadii ugu dambeeyay qaarkeen qoraallo hore oo la xiriira. Si kuwa danaynaya sahamintooda markay dhammeeyaan daabacaadan si fudud u samayn karaan:
1 Nym Protocol: Mashruuca Kaabayaasha Asturnaanta Caalamiga
1.1 Waa maxay Nym?
1.2.1 Shabakad isku dhafan (Mixnet)
1.2.2 Aqoonsiyada gaarka ah
Nym Protocol: Mashruuca Kaabayaasha Asturnaanta Caalamiga
Waa maxay Nym?
Sida laga soo xigtay degel rasmi ah ee yiri mashruuc baahsan oo baahsan kaas oo ku jira horumar buuxa, ayaa lagu tilmaamay guud ahaan sida soo socota:
"Tan iyo markii, borotokoollada Internetka ee jira ay shaandheeyaan xog xasaasi ah oo la adeegsan karo iyada oo aan la ogeyn isticmaaleyaasha. Nym waxay horumarinaysaa kaabayaasha si looga hortago daadinta xogtan iyadoo la ilaalinayo metadata baakad kasta ee shabakadda iyo lakabyada dalabka. Nym waxay siisaa asturnaanta shabakad ballaaran oo ka dhan ah weeraryahanno dhammaad-ilaa-dhammaad leh, iyo macaamil ganacsi aan la garanayn iyadoo la adeegsanayo baahinta, dib-u-kala-soocid, aqoonsi indha la '. Ujeeddada Nym waa inay dejiso asturnaanta caadiga ah ee isgaarsiinta internetka."
Halka, laga bilaabo a hab farsamo badan waxa soo socda ayaa lagu daray:
"Nym waa nidaam qarsoodi ah oo aan la oggolayn, baahsan, baahsan. Waxay bixisaa asturnaan dhammaystiran, oo u oggolaanaysa codsiyada kale, adeegyada ama xannibaadaha inay siiyaan adeegsadayaashooda ilaalin xoog leh oo metadata ah, labadaba heerka shabakadda (mixnet) iyo heerka dalabka (aqoonsiyada aan la garanayn) iyada oo aan loo baahnayn in laga dhiso asturnaanta xoqan."
El "Nym Protocol" waxay asal ahaan ka kooban tahay 3 qodob oo muhiim ah si loo hubiyo yoolalkaaga muhiimka ah. Oo kuwanu waa:
Shabakad isku dhafan (Mixnet)
Kaas oo doonaya inuu bixiyo dammaanad xoog leh oo ka dhan ah daadinta iyo ururinta metadata lakabka shabakadda. Maaddaama, ay tahay shabakad guud oo ujeeddo guud ah oo dul -saaran oo aan la garanayn oo la falgeli karta ku dhawaad ​​codsi kasta ama adeeg dijital ah, taas oo u oggolaanaysa shaqsiyaadka, iyo sidoo kale bixiyeyaasha adeegga dijitaalka ah, inay awoodaan inay dammaanad qaadaan asturnaantooda ama tan isticmaaleyaasheeda.
Aqoonsiyada gaarka ah
Waxay raadiyaan inay dadka u oggolaadaan inay muujiyaan xaqa ay u leeyihiin inay wax ku galaan oo ay wax ku qabtaan internetka iyagoo ilaalinaya asturnaanta. Shahaadooyinkan ayaa qariya oo gundhig u ah xogta looga baahan yahay adeeg la siiyo, oo ay ku jiraan caddayn eber-xog ah ee xogta gaarka ah. Shahaadooyinkaan waxaa lagu ansixiyay hab baahsan oo dadweyne, iyadoo aan la muujin xiriir ka dhexeeya isticmaalaha iyo adeegga ay rabaan inay helaan.
Kuwa doonaya inay gaaraan nidaam iyo adeeg waara. Dhiirrigelintani waxay diiradda saareysaa sidii loo gaari lahaa baahinta mareegaha iyo in la ilaaliyo tayada adeegga shabakadda. Waxaa dhiirrigeliyay dhiirri-gelinta shabakadda Seeraar, nidaamka caddeyn-shaqo ee madal ee madalkan wuxuu abaalmariyaa qanjidhada isku-dhafka taraafikada halkii laga xallin lahaa xujooyinka Merkle ee aan loo meel-dayin. Hawlwadeennada nym node ayaa lagu abaalmariyaa imtixaanka isku dhafan, iyagoo hubinaya asturnaanta qof walba.
Tan iyo, Mashruuca "Nym Protocol" wuxuu ku jiraa horumar buuxa waxaa jira wax badan oo la ogaado, aasaaso, la mideeyo, si aan u aragno mid aad waxtar u leh madal baahsan oo baahsan taasi waxay naga fadli badan tahay adeegsade ahaan marka la eego asturnaanta, qarsoodiga iyo amniga internetka.
Si kastaba ha noqotee, si ay u dhex galaan iyaga ujeeddooyinka, yoolalka iyo farsamada waxaad sahamin kartaa xiriiriyeyaasha soo socda:
Marka la soo koobo, Mashruuca "Nym Protocol" waa curdin iyo xiiso leh Mashruuca isha furan ee baahsan kaas oo bixiya barxad doonaysa inay hagaajiso asturnaanta, qarsoodiga iyo amniga internetka ee isticmaaleyaasheeda, iyo kuwaas oo dhan aaladaha ama adeegyada inuu ku biiro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Borotokoolka Nym: Isha furan iyo nidaamka asturnaanta baahsan